Njem nleta na-ahia Canadian mgbanwe ego, nke bụ ihe kwa ụbọchị ọrụ. Gburugburu ụwa, e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche mba ọzọ ego. Ịmụta a ole na ole Canadian mgbanwe ego Atụmatụ pụrụ inyere gị aka ime ka ọtụtụ n'ime gị na emefu.
N'okpuru ebe anyị ga-depụta ụfọdụ bụ isi ọnọdụ kpọmkwem ebe ị nwere ike ahia. Anyị ga-enye gị ndụmọdụ nke ụfọdụ nsogbu nwere ike ịdapụta site na ndị a ụzọ nke mgbanwe ego awa.
Airline ebu – Na ọdụ ụgbọelu, njem tebụl na-eguzobere onwe-agbanwe ego. Exchange udu na-webatara, nke bụ mgbe elu karịa ndị ọzọ mgbanwe na enye. Kasị ọdụ ụgbọelu na-ana elu udu, nke nwere ike na-eri gị dị ukwuu dị ka 20% nke nchikota traded. Ndị a bụ adaba ebe maka njem. Ọ bụ a etinyere ya mgbalị ime ka azụmahịa nakwa n'ógbè bụ kemfe. Ọ bụrụ na ị na-emetụta na-akwụ ụgwọ elu ahịa, n'ọdụ ụgbọ otu ebe ka mgbanwe ego.
Community akụ oru – Bankers-enye Canadian mgbanwe ego ọrụ. Kasị anoghi n'ulo oba na-enye mma udu karịa ọdụ ụgbọelu. Kasị anoghi n'ulo oba na-ana ụgwọ bụ dabere na ahia uru. Otu n'ime nsogbu ndị na-arụ ọrụ na ichekwa ego na bank oru, otú o sina, bụ awa nke ime ihe. Ọ bụ omume nanị iji mee ka trades n'oge na-emeghe awa. Nsogbu ọzọ bụ na ego oru nwere ike ọ gaghị na ọnọdụ na-enye ego mgbanwe na ibu ichekwa.
Debit na E Si Nweta kaadị – Debit na kaadị akwụmụgwọ-enye gị kacha mfe ka gbanwee mba ọzọ ego. Ejikari mgbanwe udu nọ asọmpi, na ị ga-enwe ike inwe mgbanwe ọrụ n'oge ọ bụla. Njem nleta mkpa, Otú ọ dị, n'ịkpọtụrụ ha kaadị ma ọ bụ debit kaadị ụlọ ọrụ na-agwa ha na ha ga-eme ezumike ná mba ọzọ na-eji nke na ha na kaadị iji hụ na obi iru ala na-adịghị agbanyụọla.
ATMs-enye gị mfe ụzọ ịgbanwe ego. Ekwu okwu gị akụ banyere ụgwọ ahụ nwere ike adị maka iji ATMs na mpụga nke n'ógbè gị.
N'ihi ya, ị nwere ike ọtụtụ ụzọ na-gbanwee ego dị ka ụgbọ elu, ichekwa ego na bank oru, akwụmụgwọ na Debit kaadị, na ATMs. Ndị a bụ ndị kasị ukwuu na-eji ngwọta. Otú o sina na Web, i nwekwara ike icheta na njikọ na-eduzi gị aka ịchọta ụzọ ọzọ ndị na-gbanwee Canadian Dollars si mgbanwe ego Atụmatụ.
Site inyerịta ego n'ụlọ akụ, ị dejupụta iche-iche na banye ọ bụla ego mgbe n'ihu a okwu ugwo. Ị nwere ike na-achọpụtazi, na ọ bụrụ na onye na-eme ka ikpîkpu, ọ ga-adị mfe dochie ya.